Android emulator Andy nwere ike ịwụnye ngwanrọ ngwanrọ cryptocurrency | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka usoro kachasị dị nhịahụ, Windows abụwo onye mmeri. Ihe kpatara ya abụghị onye ọzọ karịa ịbụ sistemụ arụmọrụ kachasị eji n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ekwenti gburugburu, ebe ihe na - agbada naanị abụọ, iOS na gam akporo, sistemụ arụmọrụ Google na - enye ndị na - eme enyi nke ndị ọzọ ihe ịtụnanya.
Android na-enye ohere wụnye ngwa sitere na isi mmalite amaghi, nke na - anọchite anya ihe egwu maka nchekwa nke ndị ọrụ nke ikpo okwu a, ndị na - etinye ngwa site na mpụga Storelọ Ahịa Play. Site na ọbịbịa nke gam akporo emulators maka PC, ọ dị ka ewu ewu nke gam akporo na ohere ị nwere ike ịme ngwa na PC abawanyela ma ụfọdụ emulators amalitela iji ọnọdụ a site na ịwụnye ngwanrọ iji mepụta cryptocurrencies.
Ngwa kachasị na etinyeworo aka n'omume ọjọọ a jiri uru nke otu anyị mee ihe maka m cryptocurrencies Anyị chọtara ya na Andy emulator, ọ bụ ezie na dịka onye nrụpụta si kwuo, ọ bụ ụgha kpamkpam ma kwupụta nsogbu a na ngwa ndị ọzọ nke ndị ọrụ nwere ike ịwụnye.
Mana ndị nchọpụta nchekwa dị iche iche na-ekwu na ọ bụ emulator Andy n'onwe ya wee wụnye ya, Ebe ọ bụ na ọ na-ekwurịta okwu na IP iji budata ngwanrọ ngwanrọ, ya mere ngọpụ na ngwa ndị ọzọ wụnye ngwanrọ enweghị nkọwa ọ bụla.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị iji gam akporo ọ bụla emulator, ozugbo anyị wepụrụ ya ngwanrọ ngwanrọ na-arụ ọrụ, ya mere egosiri ọzọ na ọ bụghị ngwa ndị ọzọ na-etinye ya, mana na ọ bụ onye nrụpụta n'onwe ya nwere mmasị ịba uru site na akụrụngwa ndị ọrụ na-egwupụta cryptocurrencies na-enweghị itinye ego ọ bụla na akụrụngwa.
Ọ bụrụ n’inwere iji ihe emulator Android, ihe ngwọta kachasị mma taa bụ BlueStacks, ọ bụ ezie na ọ na-eri nnukwu akụnụba ma na-achọ otu ike dị oke mma. Andy, ọ dị mma mgbe ọ dịruru, mana na ntụkwasị obi nke ndị ọrụ ọ naghị egwuri egwu na egwuregwu a ị tufuru ya kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Android emulator Andy nwere ike ịwụnye ngwanrọ ngwanrọ cryptocurrency
Google Maps anaghịzi enye gị ohere ide akwụkwọ Uber site na ngwa ahụ
Energy Mbadamba ụrọ Pro 4, anyị nyochaa a mbadamba na a Full HD ihuenyo na panoramic imewe